I-Aperitifs Cocktail neLounge Bar "La Rotonda di Carignano"
Ama-Aperitifs neLounge Bar "La Rotonda di Carignano" - IGenoa
Okukhethekile ukunambitha nama-panorama okumnandi.
4.9 /5 amavoti (amavoti angama-38)
I-Aperitifs Cocktail neLounge Bar "La Rotonda di Carignano" iyi-kiosk emnandi etholakala kwelinye lamaphoyinti aphambili kakhulu we IGenoa lapho ahlela khona kusihlwa komculo wokuzijabulisa nokuzilibazisa futhi anikeze okumnandi i-aperitifs, i-cocktails, i-aperitifs, ukudla kwasemini nokudla namamenyu asethiwe, ukujatshulelwa phambi kwendawo enhle kakhulu.
I-Aperitifs Cocktail neLounge Bar: ukunqamuka kokunambitheka kobumlingo eGenoa ngo "La Rotonda di Carignano"
Ama-aperitifs, ama-Cocktails kanye neLounge Bar ezinye zezinhlobo eziheha kakhulu nezilingayo ezokuzijabulisa nezakhiwo ze-gastronomy, ezihlukaniswa ubuhle nobukhulu besitayela, lapho ungaphumula khona futhi uziphazamise ngenxa yomculo omuhle nama-appetizer amahle, izitsha nama-aperitifs. The I-Cocktail neLounge Bar "La Rotonda di Carignano" iyingxenye yalesi siko esaziwayo futhi esimnandi a IGenoa Carignano, enikeza izinsuku ezimnandi ukudla kwasemini nokudla kanye nemenyu ye-la carte nemenyu esethiwe yansuku zonke enikezwa yi-yokudlela. Kuyadlula, ikakhulukazi, ku izifiso zokudla, i-aperitif kanye nama-cocktails. Kumenyu kukhona ubukhona obucebile be Izitsha zeGenese: dal pesto kuya ophaya ngo-savory, kusuka ku-nati ushukela kuya ku-focaccia.
I-Aperitifs Cocktails kanye neLounge Bar "La Rotonda di Carignano" - ubuhle obuhlukile phambi kwamaphaneli athakazelisayo
le Ama-Appetizer amele indawo esematheni lapho i- I-Lounge Bar "I-Rotonda di Carignano"ka Genoa kuyaphawulelwa ngekhono, isipiliyoni kanye nekhono labo lokulungiselela. Ama-appetizer, okujabulisa kanye nobungcweti be-Culinary obungakunambitha lapha kuzokwenziwa kukhetheke ngokwengeziwe ngokufakelwa i-enchanting panorama igingqiwe yi-kiosk, enikeza umbono okhangayo wedolobha. Lapha ungahlela futhi uthule ukudla kwasemini kwebhizinisi noma uchithe isikhathi sokuphumula esimnandi sinambitha ezinye ezinhle kakhulu iqhude. Umbono omnandi weBelvedere obheke echwebeni lika Genoa kuzoba ukuhleleka okuhlukile, ongakujabulela ngokuphelele ukubonga endaweni enezitulo namatafula.
Ama-Aperitifs Amnandi nama-Cocktails amahle kakhulu ukulungiselela ikhefu lakho
Il I-Lounge Bar "La Rotonda di Carignano" indawo enhle yokuhlangana a Genoa ngenani elikhulu lezikhathi: kusuka ekhefu elisheshayo lesidlo sasemini kuyaaperitivo kusihlwa noma at kusihlwa zomculo uchithe injabulo nokuphumula, usuka kokunambitha i-aperitif e amamenyu wetha nsuku zonke okuhlongozwe indawo yokudlela. Abanini be-kiosk bahlala behlela kusihlwa esiningi esinikezelwe cabaret kanye neukuzijabulisa komculo ukwenza umuzwa wokunambitha ozohlala lapha ube mnandi ngokwengeziwe.
I-Cocktail neLounge Bar "La Rotonda di Carignano" - kusihlwa Okujabulisayo
I-kiosk "I-Rotonda di Carignano" igcoba indawo yesizukulwane sakamuva, ene-WIFI kanye nabanikazi abasebenzayo abahlela njalo kusihlwa zomculo neminye imicimbi yokuzijabulisa, ukuhambisa futhi ukuhlekisa amakhasimende ngokwengeziwe. Le ndawo iseduze nezindawo ezisehhovisi, ngakho-ke iyaboleka ikhefu lesidlo sasemini esiphundu lapho ungayikhetha khona isidlo ekhawuntareni noma uyonikezwa i-la carte. Ukunambitha kanye nesifiso sokuhle yizinkombandlela ezimbili zekhiyoski futhi zizogcwaliseka ekwaneliseni wonke umuntu.
Ikheli: I-piazzale San Francesco D'Assisi
I-POSTAL CODE: 16128
Umakhala ekhukhwini: 349 6044612
Inombolo ye-VAT: 02280400991